Expecting A Baby? in Somali | Continence Foundation of Australia
Expecting A Baby? in Somali
Ilmo Inaad Dhasho Ma Rajeynaysaa?
Markaad uurka leedahay, waxaad tallo badan ka heshaa dad badan. Hal arin ah oo ay dad badani ka fekeraan waa callaamadaha dhibaatooyinka kontoroolka mindhicirka iyo kaadiheysta markaad uurka leedahay iyo dhalmada ka diba.
Maxay qabtaan muruqyadeyda sagxada miskuhu?
Eeg sawirka sagxada miskaha. Muruqyada sagxada miskuhu waxay qabtaan waxyaalo tiro badan. Waxay:
waxay kaa caawiyaan inay xiraan kaadiheysta, ferjiga (marinka hore) iyo qaybta danbe xiidmaha weyn (marinka dambe); iyo
Caawimaada si ay u celiso kaadiheysta, uterus (ilmogaleenka) iyo calooshooda inay ahaadaan meeshiidoo ku habooneyd.
Sidee baan ku ogaanayaa inaan dhib qabo?
Waxaa jira waxyaalo yar oo laga yaabo inay dhacaan haddii aad leedahay muruqyada sagxada miskaha oo daciif ah. Waxaa laga yaabaa:
inay kaa daadato kaadi markaad qufacdo, hindhisto, wax qaado, qososho ama aad jimicsi sameyso;
in aadan awoodin kontoroolida dhuusada;
inaad dareento rabitaan degdeg ah oo ah inaad faaruqiso kaadiheystaada ama mindhicirkaada;
kaa daadato mindhicirka oo ku soconaysa ka dib markaad musqusha tagtay;
inaad dhib kala kulanto inaad nafsad ahaantaada nadiifiso ka dib marka calooshu ku socoto;
inay kugu adkaato inaad saxarooto ilaa aad ka bedesho booskaaga ama aad isticmaashofarahaaga si aad isu caawiso, ama
Inaad ka dareento buro ferjigaaga dhexdiisa ama dareen u jiitamaya sidii xilliga caadada, badanaa dhamaadka maalinta, oo micnaheedu yahay in mid ama wax ka badan oo ah unugyada miskahaagu ku soo degayaan ferjigaaga. Soo degidu waa wax caam ah waxay ku dhacdaa hal tobankii qof oo Australiyaana.
Waxaa sidoo kale laga yaaba inaad qabto dhibaato galmo. Isla markiiba marka ilmahaagu uu dhasho, aad baad u daaleysaa waxaanad ku mashquuleysaa ilmahaaga. Dhalmada ferjigu waxay sababi kartaa daciifnimada ferjiga hareerihiisa ama dareen la’aanta. Ilmada ferjiga iyo dhibka ayaa laga yaabaa inuu sababo xannuun billo badan. Iyadoo naas nuujintu, heerarka oestrogen laga yaabo inay hooseeyaan saadaraadeed waxaa laga yaabaa inuu ferjigu qalalan yahay, oo sababi karto dhibaatooyin intaas ka sii badan. Waxaa laga yaabaa inay adiga iyo lamaanahaaga idiinka caawimaad badan tahay inaad arimahan kala hadashaan aqoonyahanka caafimaadka.
Sidee baan u sheegi karaa inaan qaadidoono dhibaatooyinka mindhicirka iyo kaadiheysta?
Dumarka qaarkiis waxay u muuqdaan kuwo ay aad ugu dhowdahay inay ku dhaceyso dhibaatooyinka mindhicirka iyo kaadiheysta, xitaa haddii ay qabeen dhalid sahlan.
Dumarka haddaba way qabaan astaamaha mindhicirka ama kaadiheysta sida sandaroomka mindhicirka xasaasiyada leh ama doonitaanka degdega ah ee inaad kaadido (sidoo kale kaadiheysta firfircoonida badan) ayaa laga yaabaa inay arintani sii xumayso ama inay ku dhacaan dhibaatooyin cusub. Mindhicirka oo ku fadhida, qufac iyo buurnida ayaa sidoo kale dhibka sii xumeyn kara.
Waxyaalaha qaarkood ee ku saabsan dhalmada ayaa ka dhigi kara qofka dumarka inay aad ugu dhowaato inay yeelato dhibaatooyinka mindhicirka iyo kaadiheysta:
dhalida ilmahaagii ugu horeeyey;
dhalida ilmo weyn;
foolashada wakhti dheer, muhiim ahaan heerka labaad ee foosha; ama
Dhibka ka dhalida ferjiga, markaad leedahay toliinmo ka dib markii lagu jaray ama daliicweyn oo aad ku leedahay bannaanka ama ferjigaaga gudihiisa marka ilmaha in diba loo soo saaro uu kaa caawiyo daboolida meesha bannaan ama isticmaalka dhakhtarka qalabka lagu soo jiido ilmaha.
Ka waran haddii dhalmada laygu soo qalo?
Doorashada dhalmada in lagugu qalo waxaa laga yaabaa inay u ekaato si aad isaga ilaalineyso dhibaatooyinkan, laakiinse sidaas uma sahlana. Dhalmo ku qalida waxaa laga yaabaa inay yareyso khatarta inay dhacdo dhibaatooyinka kontoroolka kaadiheysta oo darran laga bilaabo boqolkiiba 10% ilaa 5% ilmaha koowaad, laakiinse ka dib qaliinka saddexaad waxaa laga yaabaa inaysan jirin wax faa’iido ah gebi ahaan. Dhalmada lagugu soo qalo waxay leedahay khatarteeda. Ilmaha ku dhasha sidaan waxaa laga yaabaa inay aad ugu dhow yihiin inay qaadaan dhibaatada xagga neefsiga markuu dhasho. Waxaa laga yaabaa inay ka khatar badato hooyada iyo cabsiba laga bilaabo dhalmada lagu soo qalo waxay ka dhigi kartaa qaliinka miskaha mid aad uga sii dhib badan mustaqbalka. Saadaraadeed waxaa laga yaabaa inaad ku bedelaneyso hal dhib mid kale.
Xaallado badan, dhalmada ferjiga waxay u socotaa sidii loo qorsheeyey waana dhacdo ay waalidiintu jeclaystaan, saa daraadeed noocan dhalmada ah waa ta ugu fiican markii ay suurtogal tahay. Laakiinse dhibaatooyinku weli waa dhici karaan. Daraasad cilmiyeed baa hadda eegeysa sida ugu wanaagsan ee aan u sii ogaan karno wax ku saabsan una joojin lahayn dhibka sagxada miskaha marka la dhalayo. Hadda, uurka iyo dhalmada waxay ku lug leeyihiin sameynta doorasho u dhaxeysa noocyada kharataha kala duwan. Adiga iyo lamaanahaaga waxaad u baahan tihiin inaad ka fekertaan wax ku saabsan khatarahan iyo inaad kala wada hadashaan aqoon yahanka daryeelka uurka. Cidna ballan idiinma qaadi karto adiga iyo ilmahaaga ah natiijo dhab ah.
Maxaan ka qaban karaa muruqyada sagxada miskaha ee daciifka ah?
Dhalmada ilmaha waxaa laga yaabaa inay kala bixisay muruqyada sagxada miskaha. Wixii ficil ah ‘hoos u riixida’ ee toddobaadyada ugu horeeya ka dib markuu ilmuhu dhasho waxaa laga yaabaa inay mar labaad kala bixiyaan sagxada miskaha. Waxaad caawin kartaa inaad ilaaliso muruqyada sagxada miskaha adoon hoos u soo riixin sagxada miskahaaga. Halkan waxaa ah dhawr fikradood oo ku caawinaya.
Iskuday inaad isku soo ururiso, kor u qaado oo aad heyso muruqyada sagxada miskaha ka hor intaadan hindhisin, qufucin, ka duufsan sankaaga ama kor u qaadin.
Lugahaaga isa saar isukugu soo ururi si isku dhuujisan ka hor qufac kasta ama hindhisid.
La wadaag qof kale qaadida xamuulka.
Ha sameynin jimicsiyada boodboodida ah.
Same tababarka muruqyada sagxada miskaha si aad u xoojisid muruqyadaada sagxada miskaha (eeg warqada Tababarka Muruqyada Sagxada Miskaha ee Dumarka”).
Yeelo caaddo wanaagsan oo calooleed iyo kaadiheysba:
cun furuutka iyo khudaarta;
cab 1.5 – 2 litir oo cabitaana maalintii;
ha u tegin musqusha ‘lacala haddii’ maadaama tan laga yaabo inay yareyso intay kaadiheystaadu heyn karto; iyo
Iskuday in aanay calooshu kufadhiisan.
Ha docon markaad saxarooneysid. Si wanaagsan oo loogu fadhiisto musqusha waxaa weeye inaad gacmahaaga saarto bowdyahaaga iyo inay cagahaagu u dhow yihiin musqusha, cidhbahaaga qor u qaad. Debci muruqyada sagxada miskahaaga si debecsana u riix.
Miisaankaaga ku hey ilaa xadka saxda ah ee dhererkaaga iyo da’da, iskuna day inaadan miisaan badani ku fuulin intaad uurka leedahay.
Sii wad inaad jimicsato.
Weydiiso wixii tallo ah ee ku saabsan infekshinka kaadiheysta.
Wixii macluumaad dheeraad ah, eeg warqada “Caaddada Wanaagsan ee Kaadiheysta Qofwalba”.
Xaalladu ma ka sii fiicnaan doontaaa?
Ha qalbi jabin. Xitaa kaadiheysta aadka u xun ama kontoroolka mindhicirka isla markiiba markaad dhasho way fiicaan karaan caawimaad la’aan lixda bilood ee ugu horeeya, maadaama unugyada sagxada miskuhu, muruqyada iyo neerfayaashu ay kabmaan.
Tababarka joogtada ah ee muruqyada sagxada miskaha oo la ilaaliyo ilaa wakhti dheer, iyo sidoo kale tallada saxda ah, ayaa ku caawineysa.
Ha ilaawin inaad nafsadaada ilaaliso wakhtiga ay sahlan tahay inaad dayacdo baahidaada.
Haddii aysan waxba ka soo reynaynin lix bilood ka dib, la hadal dhakhtarkaaga, fiisiyoterabi yaqaanka ama kalkaalisada la talliyaha ceshadka kaadida.